एसईई आन्तरिक मूल्यांकनबाटै, शिक्षकका छोराछोरी र मन परेका विद्यार्थीलाई बढी नम्बर ! — onlinedabali.com
एसईई आन्तरिक मूल्यांकनबाटै, शिक्षकका छोराछोरी र मन परेका विद्यार्थीलाई बढी नम्बर !
काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को परीक्षा भौतिक रुपमा नहुने भएको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अब विद्यालयहरुले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनका विवरण सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय समितिमा पठाउने र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ ।
गत वर्ष केही विद्यार्थीहरुले आन्तरिक मूल्यांकनप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरुले शिक्षक तथा शैक्षिक संस्थाहरुले शिक्षकका छोराछोरी र आफूले मन परेको विद्यार्थीलाई बढी नम्बर दिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका थिए ।